Shirkii Golaha Wasiirada oo baaqday | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Golaha Wasiirada oo baaqday
Shirkii Khamiislaha ahaa ee toddobaadkiiba mar lagu qaban jiray xafiiska RW ayaa baaqday maanta, iyadoo aan la sheegin sababta baaqashada shirka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirka oo aad loo sugayay ayaa baaqday, waxaana farriimo loo diray xubnaha golaha wasiirada shirkaasi ka qeyb gali lahaa, iyadoo lagu war galiyay baaqashada Shirkii ay isku diyaarinayeen toddobaadkan inuu qabsoomo.
Shirka ayaa qorushu ahaa in maanta la horgeeyo 15 Safiir si ay u ansixiyeen, balse waa la baajiyay sababta baaqashada laguma sheegin farriinta sida ay noo xaqiijiyeen qaar kamida xubnihii shirkaasi ka qeyb gali lahaa ee aan la hadalnay.
Shirka ayaa lawada sugayay isagoo lahaa xiiso gaara, waxaan toddobaadkii hore la soo diiday xubnihii danjirayaasha ahaa ee la hor geeyay golaha wasiirada, waxaana lagu sheegay in la hareer maray hannaanka awood ku qeybsiga Soomaalida ee qabiilka ku saleysan, iyadoo wax laga soo baddalay ayaa mar kale la horkeeni lahaa maanta si loo ansixiyo, hayeeshee shirkii ayaa baaqday.
Xilligan kala guurka ah xilalka waxaa la isku siiyaa Olole, iyadoo qofkii laga doonayo cod loo meel mariyo qof ama laba ruux hadba miisaankiisa inta uu la egyahay in looga dhigo safiir ama sidoo kale shaqaale safaaradeed oo waddanka bannaankiisa ah.
Tani waxay kamid tahay waxyaabaha curyaamiyay horumarka dalka, in xilalka iyo shaqooyinka xafiisyada Dowladda lagu galo Olole!